आलुको बोक्रा नफाल्नुस् ! आलुको बोक्राले निको पार्छ यस्ता स्वास्थ्य समस्याहरु – सुदुरपश्चिम खबर
आलुको बोक्रा नफाल्नुस् ! आलुको बोक्राले निको पार्छ यस्ता स्वास्थ्य समस्याहरु
by सुदूरपश्चिम खबर
आलु तरकारीको राजा हो । यसको अचार पनि उत्तिकै मिठो हुन्छ । अन्य तरकारीमा आलु मिसाएर खान सकिने कारणले गर्दा घरमा अन्य तरकारी छ भने पनि आलु सधैभरी सबैजसोको घरमा हुन्छनै । विशेषत आलु भिटामिन ‘सी’को महत्वपूर्ण स्रोत हो । आधुनिक पोषण पद्धतीमा भिटामिन ‘सी’लाई रोग निरोधकको रुपमा लिइएको पनि छ ।
स्पेनका अनुसन्धानकर्ताकाले बताए अनुसार जो व्यक्तिले दैनिक आलु खान्छन् उनीहरूमा रोगसँग भिड्ने सामथ्र्य हुन्छ । त्यस्तै मलरोधक, मल तथा मूत्रलाई उत्पन्न गराउने र रक्तपित्त हटाउने विशेष शक्ति पनि यसमा पाइन्छ । आलुको साथमा आलुको ब्रोक्रा पनि फाइदाजनक छ । सबैजसोले तरकारी बनाउँदा आलुलाई तासेर फाल्ने कारणले रोगी बन्न
आज हामी आलुको ब्रोक्रा आलुसगैं खानुको फाइदाको बारेमा बताउँदैछौं । यदि तपाईले ब्रोक्रा पनि खानु भएमा यस्ता रोगबाट बच्न सक्नुहुन्छ ।
१. ब्लड प्रेशरः आलुमा पोषक तत्वको साथमा भरपुर मात्रामा पोटासियम पाइन्छ । जसले ब्लड प्रसेरलाई नियमित ढंगले सुचारु राख्नको लागी मद्दत गर्दछ । त्यसैले तरकारी पकाउँदा आलुलाई राम्ररी पखालेर मात्र नतासी पकाउने गर्नुहोस् ।
२. मोटाबोलिज्मःआलुको ब्रोकाले शरीरको मोटोबोलिज्मलाई एकदमै सहि बनाउने काम गर्दछ । आलुसगैं बोक्रालाई पकाएर भोजनमा सामेल गराएमा स्नायु प्रणाली मजबुद भई यसले निकै राम्रो तरिकाले काम पनि गर्दछ ।
३.उर्जाः आलु मिठो भएकाले सबैलाई खान मन लाग्दछ । त्यसको साथमा आलुको परिकार खानको लागी मानिसमा उर्जा शक्ति पनि आउँछ। खानको लागी मात्र नभएर जसले आलुको ब्रोक्रा खान्छ त्यसको शरीरमा उर्जा शक्ति उत्पन्न भई तागत बढाइदिन्छ । किनकि आलुको ब्रोक्रामा भिटामिन ‘बी’ ३ पाइन्छ ।
४.पाचनक्रियाः आलुको बोक्रामा भरपुर मात्रामा फाइबर पाइन्छ । उक्त फाइबरले पाचनक्रियामा समस्या नल्याई मजबुद बनाउनको लागी निकै सहयोग गर्दछ ।
४.एनीमियामाः विशेषत एनिमिया हुन नदिनको लागी यो निकै फाइदाजनक तरकारी हो । यसले एनिमियाको खतरालाई निकै कम गराउने काम गर्दछ । यदि कसैको शरीरमा आइरनको कमी भइरहेको छ भने आलुको बोक्रा खाएमा आइरनको कमी हुदैन । किनकि आलुको बोक्रा पनि आइरनको मुख्य सोत हो
पुष १० गते शुक्रबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
देशको सेवा सँगै सर्जक बनेका बोगटीको “मेरी लक्षीमा” सार्वजनिक